Shiinaha Isku xidhka muruqmaalka badan - isku xidhka iyo magdhowga mid ka mid ah soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qabasho
Isku xirnaanta waxqabadka badan - isku xirnaanta iyo magdhawga hal
Cabir: OD φ26.9-φ2032mm
Shaabadaynta EPDM, NBR, VITON, SILICONE
Halbeegga Farsamada:GRIP-M 【DAAWO
Qabsashada-M waa isku dhejisan jilicsan, waxay leedahay laba bushimahood oo weyn oo dabool leh oo u oggolaanaya ballaadhinta iyo foosha. Noocan isku xidhka ah kaliya iskuma xidho tuubooyinka, wuxuu isla mar ahaantaa magdhabaa dhaqdhaqaaqa foorara, isagoo siinaya qiime aad u weyn oo la isku daray.
Multi-function isku xidhka tuubooyinku wuxuu ku haboon yahay dhuumaha leh dhexroor ka baxsan oo ah 26.9 ～ 2032mm.
Cadaadiska shaqada ilaa 40bar.
Multi-function tuuboyinka isku xira (GRIP-M) wuxuu leeyahay faa iidada aan lahayn xaddidaad xaddidan oo qaabdhismeedkeedu wuxuu dhammeyn karaa ballaarin iyo yaraansho, taas oo ku habboon dhisidda markabka, biyaha iyo warshadda wax lagu daweeyo biyaha iyo wasakhda warshadaha, iwm. tuujinta tuujinta, si badbaado leh oo dhaqso leh ayaa loo rakibi karaa.
GRIP-M Farsamooyinka farsamada
127 5.000 126-128 18 40 149 110 54 5 10 35 25 M10 × 2
Xulashada Qalabka GRIP-M
Waxyaabaha ay ka kooban tahay V1 V2 V3 V4 V5 V6
Waxqabadka guud ee wanaagsan: waxay ku habboon tahay marin biyoodka iyo marinka biraha aan biraha ahayn. Mana ubaahan wax gaar ah warbaahinta gudaha tuubada, dhumucda dhuumaha iyo wajiga dhamaadka.
Hawlgal debecsan oo habboon: sheygu waa miisaan fudud, wuxuu daboolayaa qol yar waxaana lagu rakibi karaa qalab fudud. Isla mar ahaantaana, qaab-dhismeedka caqliga leh iyo qaabeynta, way fududahay in lagu kala furro waqti gaaban. Waana mid sicirka dib u isticmaalkiisu sareeyo waana sahlan tahay in la ilaaliyo.